Ny lesoka 4 azonao atao tsy misy mpahay lalàna interpol | Interpol UAE
Ny lesoka 4 azonao atao tsy misy mpampisolovava interpol
Interpol dia mijoro ho an'ny International Criminal Police Organisation, ary fikambanana iraisam-pirenena izy io ary misy firenena 194 mpikambana. Ireo firenena mpikambana ireo dia miara-miasa amin'ny alàlan'ny fizarana sy fidirana angon-drakitra mba hitazonana izao tontolo izao ho toerana azo antoka. Matetika, rehefa miady amin'ny ady ara-dalàna iraisam-pirenena ianao dia tsy maintsy miady amin'ireo mpanohitra tena lehibe sy matanjaka. Asa sarotra ho an'ny rehetra izany, saingy sarotra izany raha tsy fantatrao ny saro-pady amin'ny lalàna iraisam-pirenena.
Ireo mpisolovava anay Interpol dia nanana mpanjifa marobe izay tsy vonona ny hiatrika ireo fanamby ateraky ny ady ara-dalàna iraisampirenena ao amin'ny orinasanay. Matetika vao mainka miharatsy izany raha toa ka nanandrana nandamina zavatra samirery izy ireo talohan'ny nanatanterahana ny serivisinay.
Ny fifampiraharahana amin'ny Interpol dia mitaky traikefa sy fahaizana lalina, ary ireo mpisolovava no manampahaizana manokana momba ny lalàna iraisam-pirenena momba ny heloka bevava. Tsy ny mpisolovava mpanao heloka bevava rehetra no afaka manao mpisolovava amin'ny Interpol. Iray amin'ireo lesoka ataon'ny olona rehefa miatrika ady ara-dalàna manerana ny sisintany izy ireo. Nahita an'ity indray mandeha sy fotoana ity miaraka amin'ireo mpanjifa izay tonga aty aminay izahay mba hahazoana fanampiana.
Ato amin'ity lahatsoratra ity, izahay dia manome an-tsipiriany ny efatra amin'ireo hadisoana ireo amin'ny fanantenana fa hitadidy izany ianao raha sendra miady amin'ny ady ara-dalàna iraisam-pirenena ianao. Fa talohan'izay, "Inona ny atao hoe Interpol?"
Inona ny atao hoe Interpol?
Interpol - Ny Fikambanan'ny polisy misahana ny heloka bevava iraisam-pirenena dia fikambanana polisy iraisam-pirenena natsangana hiadiana amin'ny heloka bevava ampitan-tany. Manana firenena mpikambana 194 ny fikambanana, ary ny foibeny dia any Lyon, Frantsa. Ireo firenena mpikambana dia manana tamba-jotra noforonina tamin'ny alàlan'ny fampiasana fizarana sy fidirana data izay ahafahana mandrindra ny ezaka amin'ny ady heloka bevava manerana ny sisintany iraisampirenena.
Ireo firenena mpikambana dia manana fifanarahana miaraka, ahafahan'ny olona iray voarohirohy ho nanao heloka bevava tany amin'ny firenena iray voasambotra tany amin'ny firenena hafa noho io asa ratsy io. Ny hany takiana dia ny fampidiran'ny firenena manao tatitra ny angon-drakitra ao amin'ny tamba-jotra Interpol. Avy eo ny Interpol dia namoaka fampandrenesana tao amin'ny tambajotran'izy ireo manaitra ireo firenena mpikambana momba ny fahafahan'ny voampanga miaro ao amin'ny fireneny.
Izay firenena nahitana ilay voampanga, noho ny fifanarahana nifanaovan'izy ireo tamin'ilay firenena nitati-baovao, dia avy eo ny fisamborana sy ny fampodiana azy ireo hiatrika ny lalàna any amin'ny firenena manao tatitra.
Ny Interpol Notice dia fangatahana iraisampirenena amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena mpikambana amin'ny fisamborana mpanao heloka bevava. Matetika ny fangatahana dia apetraky ny rafi-pitsarana navoakan'ny governemanta namoaka, ary ny fampahalalana momba ny voampanga dia tafiditra ao anatin'ny fangatahana. Ny fampandrenesana Interpol dia fitaovana entin'ny firenena mpikambana mitazona ny filaminana manerana ny sisin-tany.
Ny Interpol dia manana fanamarihana fito samy hafa izay ampiasaina hizarana vaovao eo amin'ny mpikambana ao aminy. Filazana mena, manga, maitso, volomboasary, mavo, mainty ary ankizy izy ireo.
Navoaka ny fampandrenesana mena an'ny Interpol rehefa voarohirohy ho nanao heloka be vava. Ny fampandrenesana dia mamela ireo firenena mpikambana hanenjika ilay ahiahiana, hanara-maso azy ireo, ary, arakaraka ny fivoaran'ny raharaha, hisambotra azy ireo mandra-pahatongan'ny fireneny ny famoahana azy ireo.
Ny filazana manga Interpol dia mivoaka rehefa mitady olona voarohirohy ny firenena namoaka azy ary tsy mahafantatra izay mety hahitana azy ireo. Ny fampandrenesana dia mametraka ireo firenena mpikambana ho mailo mba hiambina ireo voarohirohy, ary raha hita any amin'ny firenena iray, io firenena io dia mampahafantatra ny firenena namoaka ilay voarohirohy ao anatin'ny sisin-taniny.
Ny fampandrenesana maitso Interpol dia miasa mitovy amin'ny filazana mena, afa-tsy ny famoahana azy noho ny heloka bevava tsy dia lehibe noho ny didy mena.
Ny fampandrenesana volomboasary Interpol dia navoaka rehefa te hampitandrina ireo firenena ahiahiana na zava-nitranga izay mandrahona ny filaminam-bahoaka.
Ny fampandrenesana mavo avy amin'ny Interpol dia mivoaka rehefa mila fanampiana iraisam-pirenena amin'ny fitadiavana olona tsy hita, matetika tsy ampy taona na olona tsy fantatra anarana ny firenena namoaka.
Navoaka ny fampandrenesana Interpol Black mba hitadiavana sy hamantarana ireo olona maty any amin'ny firenena tsy olom-pirenena.
Araka ny anarany, mivoaka ny fampandrenesana ankizy rehefa tsy hita ny ankizy, ary te-hikaroka amin'ny alàlan'ny Interpol ilay firenena namoaka.
Fahadisoana efatra azonao atao momba ny Interpol
Hevi-diso maro no noforonina manodidina ny Interpol, ny fijoroany ary ny zavatra ataony. Ireo fiheveran-diso ireo dia nahatonga ny olona maro hijaly vokatr'izay tsy ho niaretany raha toa ka nahalala bebe kokoa. Ny sasany amin'izy ireo dia:
1. Raha heverina fa sampan-draharaha iraisam-pirenena mpampihatra lalàna ny Interpol
Na dia fitaovana mahomby amin'ny fanatanterahana fiaraha-miasa iraisampirenena amin'ny ady atao amin'ny heloka bevava transnational aza ny Interpol, dia tsy maso ivoho mpampihatra lalàna manerantany. Fa kosa, fikambanana iray mifototra amin'ny fifanampiana eo amin'ireo tompon'andraikitra nasionaly mpampihatra lalàna.
Ny zavatra rehetra ataon'ny Interpol dia mizara fampahalalana amin'ireo tompon'andraikitra mpampihatra lalàna amin'ireo firenena mpikambana amin'ny ady heloka. Ny Interpol, amin'ny tenany, dia miasa amin'ny tsy fiandaniana tanteraka ary amin'ny fanajana ny zon'olombelona ahiahiana.
2. Raha heverina fa mitovy amin'ny didy fampisamborana ny filazana avy amin'ny Interpol
Fahadisoana mahazatra indrindra ataon'ny olona izany, indrindra amin'ny fanamarihana mena an'ny Interpol. Ny fampandrenesana mena dia tsy didy fampisamborana; fa kosa fampahalalana momba ny olona ahiahiana ho manao asa ratsy lehibe. Ny Fampandrenesana Mena dia fangatahana tsotra fotsiny ho an'ireo masoivohon'ny mpampihatra lalàna amin'ireo firenena mpikambana mba hitadiavana, hitadiavana, ary hisamborana "olona vonjimaika" ny olona voampanga.
Ny Interpol dia tsy manao ny fisamborana; ny masoivohon'ny mpampihatra lalàna ao amin'ny firenena izay nahitana ny ahiahiana no manao azy. Na eo aza izany, ny maso ivoho mpampihatra lalàna eto amin'ny firenena izay nahitana ny ahiahiana dia mbola tokony hanaraka ny fizotran'ny rafitra ara-pitsarana ao aminy amin'ny fisamborana ilay olona ahiahiana. Izany dia milaza fa ny didim-pitsarana dia mbola tokony havoaka alohan'ny hisamborana ilay ahiahiana.
3. Ny fiheverana fa ny filazana mena dia tsy misy dikany ary tsy azo toherina
Ity dia segondra manakaiky ny finoana fa ny fampandrenesana mena dia didy fampisamborana. Matetika, rehefa misy fampandrenesana mena momba ny olona iray, ny firenena izay ahitana azy ireo dia hampihena ny fananany ary hanafoana ny visa-dry zareo. Ho very asa koa izy ireo ary hanimba ny lazany.
Ny maha-lasibatry ny fampandrenesana mena dia tsy mahafinaritra. Raha misy olona manodidina anao ny firenenao dia azonao atao ny manohitra ny fampandrenesana. Ny fomba mety hanoherana ny Red Notice dia manohitra izany raha mifanohitra amin'ny fitsipiky ny Interpol izy io. Anisan'izany ny:
Ny Interpol dia tsy afaka miditra an-tsehatra amin'ny hetsika ara-politika, ara-tafika, ara-pivavahana na ara-pirazanana. Araka izany, raha mahatsapa ianao fa navoaka ny fampandrenesana mena noho ireo antony voalaza etsy ambony ireo dia tokony hihaika izany ianao.
Tsy afaka miditra an-tsehatra ny Interpol raha toa ka avy amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy na lalàna na fifanolanana manokana ny fandikan-dalàna mena.
Ankoatr'ireo voalaza etsy ambony ireo, misy fomba hafa ahafahanao manohitra ny Filazana Mena. Na izany aza, mila mitazona ny serivisin'ny mpisolovava iraisam-pirenena manam-pahaizana momba ny heloka bevava ianao hiditra amin'ireo fomba hafa ireo.
4. Raha heverina fa misy firenena afaka mamoaka Fampandrenesana Mena na inona na inona antony heveriny fa mety
Nasehon'ny fironana fa misy firenena mifanaraka amin'ny tambajotra midadasika an'ny Interpol ho an'ny tanjona hafa ankoatry ny namoronana ny fikambanana. Betsaka ny olona traboina tamin'ity fanararaotana ity, ary nandositra izany ny fireneny satria tsy nahalala zavatra tsara ireo olona voakasik'izany.
Mitadiava fanampiana matihanina ary mankanesa any amin'ireo mpisolovava anay Interpol any UAE anio!
Ireo mpisolovava anay Interpol ao amin'ny Amal Khamis Mpisolovava sy mpanolo-tsaina ara-dalàna no tsara indrindra any UAE. Izahay dia ampy hanomezana anao ny serivisy ara-dalàna ilainao, na lehibe toy inona aza ny trangao ary kely hanomezana anao ny sain'ny olona mendrika anao.
Amal Khamis Advocates dia ekipa matihanina, izay noheverina ho manampahaizana amin'ny sehatra misy azy ireo. Tena za-draharaha sy traikefa an-taonany maro izahay amin'ny fitantanana ny Interpol Notices any UAE.
Raha mitady mpisolovava Interpol any UAE ianao, izay tena mahay, mitandrina ny filanao ary mihaino ny ahiahinao, dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Izahay dia manolo-tena hanome serivisy ara-dalàna tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay rehetra ary hiezaka hanome izay ilainao.
Inona koa? Manam-pahaizana manokana momba ny lalàna mifehy ny heloka bevava iraisam-pirenena izahay ary mahalala ny zava-drehetra momba ny raharaha Interpol. Mankanesa any anio manoratra fotoana aminay.